Nepal Auto | एलाइन्मेन्ट र व्यालेन्सर हाम्रो स्टार प्रोडक्ट
एलाइन्मेन्ट र व्यालेन्सर हाम्रो स्टार प्रोडक्ट 10 Shrawn, 2075
मानाटेक इलेक्ट्रोनिक्स प्रालि
मानाटेकका बारेमा बताइदिनुस न ?
मानाटेक आधुनिक र सुविधासम्पन्न वर्कसप निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण उत्पादन गर्दै आइरहेको विश्वको प्रख्यात कम्पनी हो । यसको प्लान्ट भारतमा छ । यो कम्पनीले प्रायः सम्पूर्ण रेन्जका ग्यारेज उपकरणहरु उत्पादन गर्ने भएपनि ह्विल एलाइन्मेन्ट , टायर व्यालेन्सिङ र टायर चेन्जरमा ख्याति कमाएको छ । ल्याटिन अमेरिका, अमेरिका, युरोप, अफ्रिका, मध्यपूर्व र दक्षिणपूर्वी एसियाका ७० भन्दा बढी देशमा कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरिसकेको छ ।
यी उपकरण प्राय सफ्टवयेरमा आधारित हुने र भारत आफैमा सफ्टवयेर उत्पादनका दृष्टिकोणले विश्वमै अग्रणी मानिने हुँदा हाम्रो उत्पादन चिनियाँको तुलनामा उत्कृष्ट छ । ग्राहकलाई विक्री पछिको सेवामा समेत समर्पित भएर सेवा दिने कम्पनी भएको हुँदा विश्वबजारमा मानाटेकले अलग पहिचान बनाउन सफल भएको छ ।
कम्पनीद्वारा उत्पादन भएर विश्व बजारमा निर्यात हुने उपकरण कस्ता छन् ?
एउटा आधुनिक वर्कसपका लागि चाहिने सवैजसो उपकरण उत्पादन विश्वबजारमा निर्यात गरिरहेका छौ । हामीसँग थ्रीडी ह्विल एलाइन्मेन्ट , ह्विल व्यालेन्सिङ, टायर चेन्जर, टु पोस्ट लिफ्ट, सिजर्स लिफ्ट, वासिङ उपकरण, पेन्ट वुथ र प्रदुषण मापन गर्ने उपकरण लगायत अन्य थुप्रै रेन्जका उत्पादन छन् । यसमध्ये पनि ह्विल एलाइन्मेन्ट र व्यालेन्सिङ मानाटेकको स्टार प्रोडक्ट हो । ह्विल एलाइन्मेन्टका क्षेत्रमा हामीले विश्व बजारमै पहिलोपटक नयाँ प्रविधिको आविष्कार र त्यसको सफल परिक्षण समेत गरेका छौ । जस्तो कमर्सियल भेइकल्सका लागि मानाटेकले नै पहिलोपटक थ्रीडी प्रविधिमा आधारित थ्रीडी एलाइन्मेन्टको विकास गरेको छ । जसलाई विश्वका पाँच शक्तिशाली राष्ट्रहरु अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप, बेलायत र भारतले प्याटेन्टेड प्रोडक्टका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
भारत र नेपालमा मानाटेकको बजार अवस्था कस्तो छ ?
ग्यारेज इक्विपमेन्टको उत्पादन र यसको विक्री वितरणलाई हेर्दा हामी आजका दिनमा भारतीय बजारमा नेतृत्वदायी भुमिकामा नै छौ । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि सोचे अनुसार नै बजार विस्तार भैरहेको छ । नेपाली बजारमा हाम्रो उपकरणको माग हरेक बर्ष बढिरहेको छ । नेपालको अटोमोबाइल उद्योगमा सिप्रदी अग्रणी कम्पनी भएको हुँदा पनि हामीलाई यहाँ बजार विस्तार गर्न सजिलो भएको हो । विगत १० बर्षदेखि नेपालमा हामीले सिप्रदीसँग सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेका छौ ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा तपाइले यहाँको बजार र ग्राहकको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ?
नेपालमा यो मेरो तेस्रो भ्रमण हो । तीनै पटक मानाटेकको बजारीकरणका लागी आएको हुँ । हरेक भ्रमणमा आउँदा म सिप्रदीको टिमसँगै बजारमा निस्कने गर्छु । यसपटक पुरै तीन दिन बजार घुम्दा मैले के थाहा पाए भने नेपालमा अझै पनि धेरैजसो ग्राहकलाई ह्विल एलाइन्मेन्ट र व्यालेन्सिङका वारेमा पर्याप्त जानकारी छैन । वर्कसपमा पनि यस्ता उपकरण अनिवार्य राख्नुपर्छ भन्ने चेत रहेनछ । सवारीसाधनको एलाइन्मेन्ट र व्यालेन्सिङ गर्दा के के फाइदा हुन्छन् भन्ने ज्ञान नहुँदा यसको महत्व कम भएको मेरो निष्कर्ष छ । यी विषयमा ग्राहकलाई जानकारी दिने गरी आगामी दिनमा हामीले सिप्रदीसँग मिलेर जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्ने योजना बनाएका छौं ।
ह्विल एलाइन्मेन्ट र व्यालेन्सिङ गर्दा गाडीधनीलाई के फाइदा हुन्छ ?
कुनैपनि सवारी साधन गुड्दै गएपछि त्यसको चक्का र एंगलहरुमा फेरवदल हुन्छ । जसका कारण टायर सही स्थानमा नवसेर गाडी कोल्टिने, बढी मात्रामा थर्किने जस्ता समस्या पैदा हुन्छन् । यसले गाडीको पर्फमेन्स कम गर्नुको साथै यात्रा असहज हुने र दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाउँछ । टायरको आयु कम गर्ने र इन्धन खपत बढी हुनेजस्ता समस्या पनि देखा पर्छन । यस्ता समस्याको समाधानका लागि दक्ष तथा अनुभवी टेक्निसियनको सहायतामा आधुनिक उपकणको प्रयोग गरी गाडीको एलाइन्मेन्ट र व्यालेन्सिङ समय समयमा गराइराख्नु पर्छ । यसरी एलाइन्मेन्ट र व्यालेन्सिङ गर्दा टायरको आयु ३० प्रतिशतसम्म बढ्छ भने इन्धन खपतमा समेत कमी आई माइलेज बढाउन मद्दत गर्छ । नेपालका अधिकांश बाटो कच्ची, साँघुरो र धेरै घुम्तियुक्त हुने हुँदा यहाँ एलाइन्मेन्ट र व्यालेन्सिङको महत्व झन बढी छ ।
सामान्यतया एलाइन्मेन्ट र व्यालेन्सिङ प्यासेन्जर कारका लागि हो भन्ने बुझाई छ नि ?
यो आशिंक सत्य भएपनि पूर्ण सत्य होइन । प्यासेन्जर कार र कमर्सियल दुवै सेग्मेन्टका लागि एलाइन्मेन्ट र व्यालेन्सिङको महत्व उत्तिकै छ । प्यासेन्जर कार प्रायः गाडीधनी आफैले चलाउने हुँदा केयर बढी हुन्छ । तर कमर्सियल भेइकललाई ड्राइभरका भरमा छाडिन्छ । त्यसैले गाडीमा के कस्तो समस्या छ भन्ने विषयमा गाडी धनीलाई जानकारी नुहन सक्छ । यस हिसावले गाडीको समस्या उचित समयमै समाधान गर्न पनि कमर्सियल भेइकल्सको एलाइन्मेन्ट र व्यालेन्सिङ समय समयमा गराइनुपर्छ ।
अर्को कुरा कमर्सियल भेइकल्समा टायर परिवर्तन गर्दा ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ । यदि गुडिरहेको टायरको आयु बढाउन सकियो भने त्यसको फाइदा गाडीधनीलाई नै हुन्छ । यस हिसावले हेर्दा पनि टायरको आयु बढाउन, इन्धन खपत कम गर्न र गाडीमा ठूलो समस्या आएर दुर्घटना निम्तिनबाट जोगाउन पनि निश्चित अवधिमा कमर्सियल गाडीको समेत एलाइन्मेन्ट र व्यालेन्सिङ गराउनु अनिवार्य छ । कमर्सियल भेइकल्समा यो प्रविधिको महत्वलाई वुझेर नै टाटा र अशोक लेल्यान्ड जस्ता कम्पनीले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको सिक्स एक्सेल गाडीमा मानाटेकको विशेष प्रविधियुक्त उपकरण प्रयोग गरी एलाइन्मेन्ट र व्यालेन्सिङ गरिँदै आएको छ ।
हामी मार्केट लिडर